မိဘများ သားသမီးကို ချစ်တတ်ကြပါစေ - Barnyar Barnyar
May 19, 2022 thanzin laypyay Life Style 0
“အမေ ဒီဟင်းနဲ့မစားချင်ဘူး… ဟိုဟင်းနဲ့စားမယ်” အမေ့အမြင်မှာ သူ တောင်းဆိုတဲ့ဟင်းနဲ့ ကျွေးလိုက်ရင် နားအေးတာပဲလို့ မြင်ကောင်း မြင်နိုင်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ခလေးစိတ်ထဲမှာ… စားချင်သလို စားခွင့် ရှိတယ်… စားချင်သလောက် စားမယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်အရာကိုမှ ကန့်သတ် (စည်းကမ်း) ထားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကလေးတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝင်လာနေတာကို ဒီအမေ သတိ မထားမိလိုက် ပါဘူး “အမေ… သားဒီနေ့ ကျောင်းမသွားချင်ဘူး”
“အေး အေး… အမေ ခွင့်တိုင်ပေးမယ်” ဒီအမေ အတွေးထဲမှာ ဒီနေ့ တစ်ရက် ကျောင်းမသွားတာနဲ့ ဘာမှမထူးပါဘူးလို့ ထင်မှတ်နေတာပါ… တကယ်တော့ ကျောင်းပုံမှန် သွားရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းကို အလွယ်တကူ ချိုးဖောက်ဖို့ အားပေးကူညီလိုက်တာပါ…
ကျောင်းတစ်ရက် ပျက်တာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ကလေးစိတ်ထဲမှာ “ငါမတက်ချင်လည်း ရတာပဲ” ဆိုတဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို အလွယ်တကူ မလိုက်နာချင်တဲ့စိတ်က တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာတတ်ပါတယ်… ဒါကို ဒီအမေ သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး…
“အမေ သားဘယ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်လာတယ်” “အေး… ဦးအောင်သာပြန်ဆော်ခဲ့ လုံးဝ မခံခဲ့နဲ့… ဖြစ်လာသမျှ အမေလိုက်ရှင်းမယ်”
ဒီအမေ အမြင်မှာ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ငါ့သားနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်… ငါလိုက်ရှင်းမယ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမျိုး…. တကယ်တော့ ကလေးဟာ ပြသနာတခုခုကို သူ့အရွယ်နဲ့သူ မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အရင်ပြုမူတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး… ဘာလုပ်လုပ် ငါ့မိဘရှင်းမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးကို တဖြည်းဖြည်း ဖန်တီးယူလာတာပါ
ဒါကို ဒီအမေ သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး… ကြီးလာရင် တဖြည်းဖြည်း သင်ယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခလေးဆိုတာ သွေးတိုးစမ်းတတ်ပါတယ်* (ပထမအရွယ်မှာ ချော့ရပါတယ်… ဒုတိယအရွယ်မှာ ခြောက်ရပါတယ် တတိယအရွယ်မှာ ချော့တစ်ခါခြောက်တစ်လှည့် လုပ်ရပါတယ်…) ငယ်စဉ်ကတည်းက သင်ကြားပေးလို့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်
သူ့ဖိနပ်ကိုသူ စနစ်တစ်ကျ ချွတ်ခိုင်းပါ… ထမင်းစားတာကို မဖိတ်မစင်အောင် စားခိုင်းပါ.. (ကိုယ် ကြွေးချင်တဲ့ အစာအဟာရကို မဖြစ်မနေ ခလေးစားအောင် ကြိုးစားပါ)
သူ ကစားပြီးသား ကစားစရာကို သူကိုယ်တိုင် စနစ်တစ်ကျသိမ်းခိုင်းပါ… (မသိမ်းရင် နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကို လုံးဝခွင့်မပြုပါနဲ့) ငယ်စဉ်ထဲက စနစ်တကျ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ပြုစုပျိုးထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ငယ်ငယ်ထဲက စည်းကမ်းတကျမရှိတဲ့ ခလေးဟာ ကြီးလာရင်လည်း ဘယ်စည်းကမ်းမျိုးမဆို အလွယ်တကူ မလိုက်နာဖို့ များပါတယ်
ကလေးတွေကိုပေးရမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ… ပူဆာသမျှအရုပ်တွေ ဝယ်ပေးတာမျိုး… ပို့ခိုင်းသမျှ ကစားကွင်းတွေ အမြဲတစေ လိုက်ပို့တာမျိုးရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး
လက်ရှိရှိနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်အသိတရားလေးနဲ့ စည်းကမ်းတကျလေး ပျော်ရွှင်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကလေးအိပ်နေလို့ မနှိုးချင်လို့ ကျောင်းပျက်တာကို အရေးမကြီးသလို ယူဆနေတဲ့မိဘတွေ တနေကုန် ဖုန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့ မခွာတဲ့ ခလေးတွေကို ပြောမရဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တခုထဲနဲ့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ မိဘတွေ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ငါတို့တောင်မသိတာတွေ သူသိတယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေတဲ့ မိဘတွေ…
တစ်နေ့ ၁၀နာရီလောက် စာလုပ်ခိုင်းထားပြီး ကြီးလာရင်တော့ သေချာပေါက် ပညာတတ်ဖြစ်မှာပဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ မိဘတွေ… ခလေးလေးက လူကြီးလောက်နီးနီး ဆဲတတ်တာကို စကားတတ်တယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ မိဘတွေ ခလေးလေးက ဘီယာဝိုင်း လိုက်ထိုင်သောက်တတ်တာကို ဆရာကြီးကွဆိုပြီး ကြံဖန်ဂုဏ်ဆာနေကြတဲ့ မိဘမျိုးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်…
ကိုယ့်ခလေး ကိုယ်ကြိုက်တာ လုပ်နိုင်ပါတယ်… ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ်ကြိုက်သလို ပုံသွင်းနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ သတိပေးချင်ပါတယ် ပစ်ချင်သလို ပစ်ထားတဲ့မျိုးစေ့… ပေါက်ချင်သလို ပေါက်မှာပဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်
( ချစ်ခြင်းကို နှစ်ခြင်းဖြင့် အနိုင်မယူမိပါစေနှင့် ) Credit:;Daw Aye Ma Ma Myo ( EFG )
မိဘမြား သားသမီးကို ခဈြတတျကွပါစေ
“အမေ ဒီဟငျးနဲ့မစားခငျြဘူး… ဟိုဟငျးနဲ့စားမယျ” အမအေ့မွငျမှာ သူ တောငျးဆိုတဲ့ဟငျးနဲ့ ကြှေးလိုကျရငျ နားအေးတာပဲလို့ မွငျကောငျး မွငျနိုငျပါတယျ…
ဒါပမေယျ့ ခလေးစိတျထဲမှာ… စားခငျြသလို စားခှငျ့ ရှိတယျ… စားခငျြသလောကျ စားမယျဆိုတာမြိုး ဘယျအရာကိုမှ ကနျ့သတျ (စညျးကမျး) ထားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ ခံယူခကျြကလေးတှေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဝငျလာနတောကို ဒီအမေ သတိ မထားမိလိုကျ ပါဘူး “အမေ… သားဒီနေ့ ကြောငျးမသှားခငျြဘူး”
“အေး အေး… အမေ ခှငျ့တိုငျပေးမယျ” ဒီအမေ အတှေးထဲမှာ ဒီနေ့ တဈရကျ ကြောငျးမသှားတာနဲ့ ဘာမှမထူးပါဘူးလို့ ထငျမှတျနတောပါ… တကယျတော့ ကြောငျးပုံမှနျ သှားရမယျဆိုတဲ့ စညျးကမျးကို အလှယျတကူ ခြိုးဖောကျဖို့ အားပေးကူညီလိုကျတာပါ…
ကြောငျးတဈရကျ ပကျြတာ ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ ကလေးစိတျထဲမှာ “ငါမတကျခငျြလညျး ရတာပဲ” ဆိုတဲ့ ဘယျအရာကိုမဆို အလှယျတကူ မလိုကျနာခငျြတဲ့စိတျက တဖွညျးဖွညျး အားကောငျးလာတတျပါတယျ… ဒါကို ဒီအမေ သတိမထားမိလိုကျပါဘူး…
“အမေ သားဘယျသူနဲ့ ရနျဖွဈလာတယျ” “အေး… ဦးအောငျသာပွနျဆျောခဲ့ လုံးဝ မခံခဲ့နဲ့… ဖွဈလာသမြှ အမလေိုကျရှငျးမယျ”
ဒီအမေ အမွငျမှာ ဒီလိုပွဿနာတှကေို ငါ့သားနိုငျကိုနိုငျရမယျ… ငါလိုကျရှငျးမယျ ဘာဖွဈဖွဈဆိုတာမြိုး…. တကယျတော့ ကလေးဟာ ပွသနာတခုခုကို သူ့အရှယျနဲ့သူ မဆုံးဖွတျနိုငျတော့ပဲ ကိုယျထိလကျရောကျ အရငျပွုမူတတျတဲ့ စိတျဓာတျမြိုး… ဘာလုပျလုပျ ငါ့မိဘရှငျးမှာပဲဆိုတဲ့ စိတျဓာတျမြိုးကို တဖွညျးဖွညျး ဖနျတီးယူလာတာပါ
ဒါကို ဒီအမေ သတိမထားမိလိုကျပါဘူး… ကွီးလာရငျ တဖွညျးဖွညျး သငျယူသှားလိမျ့မယျဆိုတာ မဟုတျပါဘူး။ ခလေးဆိုတာ သှေးတိုးစမျးတတျပါတယျ* (ပထမအရှယျမှာ ခြော့ရပါတယျ… ဒုတိယအရှယျမှာ ခွောကျရပါတယျ တတိယအရှယျမှာ ခြော့တဈခါခွောကျတဈလှညျ့ လုပျရပါတယျ…) ငယျစဉျကတညျးက သငျကွားပေးလို့ရတဲ့ ကိုယျပိုငျစညျးကမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ
သူ့ဖိနပျကိုသူ စနဈတဈကြ ခြှတျခိုငျးပါ… ထမငျးစားတာကို မဖိတျမစငျအောငျ စားခိုငျးပါ.. (ကိုယျ ကွှေးခငျြတဲ့ အစာအဟာရကို မဖွဈမနေ ခလေးစားအောငျ ကွိုးစားပါ)
သူ ကစားပွီးသား ကစားစရာကို သူကိုယျတိုငျ စနဈတဈကသြိမျးခိုငျးပါ… (မသိမျးရငျ နောကျထပျသူ့ရဲ့ဆန်ဒကို လုံးဝခှငျ့မပွုပါနဲ့) ငယျစဉျထဲက စနဈတကြ တဖွညျးဖွညျးခွငျး ပွုစုပြိုးထောငျရမှာ ဖွဈပါတယျ
ငယျငယျထဲက စညျးကမျးတကမြရှိတဲ့ ခလေးဟာ ကွီးလာရငျလညျး ဘယျစညျးကမျးမြိုးမဆို အလှယျတကူ မလိုကျနာဖို့ မြားပါတယျ
ကလေးတှကေိုပေးရမယျ့ စဈမှနျတဲ့ ပြျောရှငျခွငျးဆိုတာ… ပူဆာသမြှအရုပျတှေ ဝယျပေးတာမြိုး… ပို့ခိုငျးသမြှ ကစားကှငျးတှေ အမွဲတစေ လိုကျပို့တာမြိုးရယျတော့ မဟုတျပါဘူး
လကျရှိရှိနတေဲ့ အနအေထားမှာ ရှိနတေဲ့ပတျဝနျးကငျြ ရောကျနတေဲ့အသကျအရှယျမှာ သူ့ကိုယျပိုငျအသိတရားလေးနဲ့ စညျးကမျးတကလြေး ပြျောရှငျစရေမှာဖွဈပါတယျ
ကလေးအိပျနလေို့ မနှိုးခငျြလို့ ကြောငျးပကျြတာကို အရေးမကွီးသလို ယူဆနတေဲ့မိဘတှေ တနကေုနျ ဖုနျးနဲ့မကျြနှာနဲ့ မခှာတဲ့ ခလေးတှကေို ပွောမရဘူး ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတခုထဲနဲ့ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ မိဘတှေ ဖုနျးတဈလုံးမှာ ငါတို့တောငျမသိတာတှေ သူသိတယျဆိုပွီး ဂုဏျယူနတေဲ့ မိဘတှေ…
တဈနေ့ ၁၀နာရီလောကျ စာလုပျခိုငျးထားပွီး ကွီးလာရငျတော့ သခြောပေါကျ ပညာတတျဖွဈမှာပဲလို့ စိတျကူးယဉျနတေဲ့ မိဘတှေ… ခလေးလေးက လူကွီးလောကျနီးနီး ဆဲတတျတာကို စကားတတျတယျဆိုပွီး ဂုဏျယူနကွေတဲ့ မိဘတှေ ခလေးလေးက ဘီယာဝိုငျး လိုကျထိုငျသောကျတတျတာကို ဆရာကွီးကှဆိုပွီး ကွံဖနျဂုဏျဆာနကွေတဲ့ မိဘမြိုးတှေ ပတျဝနျးကငျြမှာ အမြားကွီးတှနေ့ရေပါတယျ…
ကိုယျ့ခလေး ကိုယျကွိုကျတာ လုပျနိုငျပါတယျ… ကိုယျ့သားသမီး ကိုယျကွိုကျသလို ပုံသှငျးနိုငျတယျ ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့ သတိပေးခငျြပါတယျ ပဈခငျြသလို ပဈထားတဲ့မြိုးစေ့… ပေါကျခငျြသလို ပေါကျမှာပဲဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော
( ခဈြခွငျးကို နှဈခွငျးဖွငျ့ အနိုငျမယူမိပါစနှေငျ့ ) Credit:;Daw Aye Ma Ma Myo ( EFG )
Hits Today : 8927
Total Hits : 318635